dayniile » Al-Shabaab oo mar kale weeraray ciidamada Shiiikh Roobow Abuu Mansuur
Al-Shabaab oo mar kale weeraray ciidamada Shiiikh Roobow Abuu Mansuur
Ciidamada Al-shabaab oo mar kale maanta weerar ku qaadey degaanka Abal oo ka tirsan gobolka Bakool, halkaasi oo uu ku sugan yahay Sheekh Muqtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur).
Dagaalka dhexmaray ururka Al-shabaab iyo Maleeshiyaadka uu wato Sheekh Muqtaar ayaa la sheegay inuu socday mudo saacado ah, kaasi oo ka dhashay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay.
Masuuliyiinta Maamulka Koonfur Galbeed, ayaa sheegay inay heleen macluumaad ku saabsan dagaalkaasi dhexmaray Shabaab iyo ciidamada Abuu Mansuur khasaaraha ka dhashay inta uu la eeg yahay.
Al-Shabaab, ayaa Arbacadii dagaal culus ku qaaday Deegaanka Abal, oo uu ku sugan yahay Mukhtaar Roobow Cali, ka dib markii uu ku gacan seyray in uu ururka dib ugu soo laabto. Abal waxay qiyaastii 18km u jirtaa Magaalada Xudur.
Inta la xaqiijiyay Dagaalkii Arbacadii dhexmaray Maleeshiyaadka Sheekh Muqtaar iyo uruka Al-shabaab ayaa waxaa ku dhimatay ku dhowaad 20 Qof oo dhinacyadii dagaalamay ah, sidoo kale Dagaalkaa waxaa Gaari nuuca dagaalka ah looga gubay Abuu Mansuur.